नयाँ दिल्लीमा आज नेपाल-भारतबीच वार्ता हुँदै, येस्ता छन बिषयहरु…. – NepalajaMedia
नयाँ दिल्लीमा आज नेपाल-भारतबीच वार्ता हुँदै, येस्ता छन बिषयहरु….
January 15, 2021 105
काठमाडौं । नेपाल–भारतबीच भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आज वार्ता हुँदैछ । संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठक हिजोदेखि सुरु भएको छ । आज दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीसहितको संयुक्त आयोगको बैठक बस्नेछ । विहीबारको बैठकले पूर्वतयारीमा विविध कार्यसूचीका कार्यतालिका निर्माण तथा छलफलका विषयसूची तय गरेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल विहीबार नै दिल्ली पुगेको हो । नेपालले सीमा समस्या, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत, सीमा विवाद र वार्ताको वातावरण, पूर्वाधार विकासमा साझेदारी, दुई देशीय सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, लगानीमैत्री सहकार्य, कृषिमा दुई पक्षीय सहयोग, पर्यटनमा साझेदारी तथा दुई देशबीचको सांस्कृतिक सहकार्यका विषयमा पनि बैठकमा दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलले बृहत्त छलफल गर्ने गरी आफ्नो कार्यसूची दुई दिनअघि नै सार्वजनिक गरेको छ ।
भारतले हिजो बिहान कार्यसूची तथा बैठकका विविध गतिविधिबारे औपचारिक रूपमा वक्तव्य सार्वजनिक गरेको हो । प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन, कोभिड खोपमा साझेदारीजस्ता विषयमा महत्त्वपूर्ण सहमति हुने नेपाल सरकारको अपेक्षा छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएअनुसार आज बिहान ११ बजे परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करबीच भेटवार्ता हुनेछ । त्यसपछि हैदरावाद हाउसमा संयुक्त आयोगको बैठक सुरु हुनेछ । भारत भ्रमणका क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्तासमेत गर्नेछन् । उनी शनिबार साँझ स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।
Prevयसकारण महादेवलाई ‘निराकार’ रुपमा पूजिन्छ…
Nextउत्तर कोरियाले सार्वजनिक गर्यो ‘संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली अस्त्र’, के छ त्यसमा ?
संसारकै ‘बोल्ड’ टिभी होस्टका हट अवतार, हेर्नुस् १२ तस्बिर
फागुन २६ गते बुधबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !
नवजीवन हस्पिटलमा चिकित्सकको लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु